Nubia Z18: Shaandhaysay qeexitaanka dhamaadka-sare | Androidsis
Shaandheeyey sifooyinka Nubia Z18 kahor soo bandhigideeda
Eder Ferreño | | Mobiles, Noticias
Toddobaad ka hor sumadda Shiinaha ayaa soo bandhigtay Nubia Z18 Mini. Maalintiisii ​​waxaan kuu sheegnay inay ahayd nooc ka yara fudud kan xiga ee dhamaadka-sare ah Nubia Z18. Dhamaadka sare waxaan horeyba uheysanay qeexitaankiisa, kuwaas oo ku xirnaa daadasho. Markaa intaan la soo bandhigin ka hor ayaan ogaan karnaa wuxuu taleefanku noo diyaariyay.
Hal shay ayaa caddaaday, waana in Nubia ay la socoto dhamaanteed tan Nubia Z18. Shirkaddu waxay soo bandhigeysaa dhammaad run ah oo dhab ah. Marka waxaan filan karnaa taleefan awood leh dhinac walba. Filashooyinka ayaa runtii badan.
Waxay ahayd TEENA halkaas oo aan awoodnay inaan ku aragno sawirradii ugu horreeyay ee waxa loo malaynayo inuu yahay naqshadda qalabka. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale dhexdeena ku haynaa qeexitaankiisa koowaad. Marka waxaan heleynaa fikrad cad oo cad oo ku saabsan dhamaadka-sare ee Nubia. Waana arki karnaa shaqadii ay shirkaddu ka qabatay arrintan. Kuwani waa faahfaahinta xaday ee Nubia Z18:
Screen: 5,99 inji FullHD + oo leh 18: 9 saamiga
Gacaliye: Snapdragon 845
Kaydinta Gudaha: 64GB / 128GB
Nidaamka hawlgalka: Android 8.0 Oreo
Kaameerada hore: 8 MP oo leh muraayad ballaadhan
Cámara trasera: Kamarad labala 24 MP
Batariga: 3.350 mAh
kuwa kale: USB Nooca C, Dual SIM, akhristaha sawirka faraha
Waan arki karnaa taas shirkaddu waxay dooratay nooc run ah oo heer sare ah oo leh qaabkan. Aalad heysata processor-ka ugu fiican suuqa iyo qeexitaannada wanaagsan guud ahaan. Naqshadeynta waxaan ku leenahay sawirrada waana arki karnaa inay u hoggaansan tahay dareenkaas.
Xilligan la joogo taariikhda soo bandhigida Nubia Z18 lama yaqaan. Ogeysiis rasmi ah ayaa la filayaa dhamaadka bishaan ama laga yaabee horraanta bisha May. Laakiin waqtigan la joogo waxba lama xaqiijin. Marka waxaan rajeyneynaa inaan ogaanno xogtaan dhowaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Shaandheeyey sifooyinka Nubia Z18 kahor soo bandhigideeda
Ruushka ayaa weydiistay Google inay Telegram ka saarto Play Store